“Arsene Wenger Wuxuu Iigu Yeeray Inaan Tababar La Sameeyo Arsenal” – Gool FM
“Arsene Wenger Wuxuu Iigu Yeeray Inaan Tababar La Sameeyo Arsenal”
Dajiye April 27, 2018
(Arsenal) 27 Abriil 2018 Ciyaaryahanka caanka ah ee ciyaaraha Formula One Lewis Hamilton ayaa wuxuu daboolka ka qaaday sida xoogan uu ula yaabay shaqsiyada Arsene Wenger, oo dhawaan shaaca ka qaaday inuu ka tagayo Gunners dhamaadka xili ciyaareedkan. Kadib mudo dhan 22 sano uu soo maamulayay.
Lewis Hamilton ayaa u sheegay: “Wuxuu mar walba ahaa saaxiibkey, waxaa ii farxad ah inaan la kulmay isaga”.
“Wuxuu kooxda u mujiyay daacadnimo waayihiisii guulaha iyo xiliyadii xumaa, waqtiyadii uu lasoo kulmay amaanta iyo dhaleeceenta, halka sidoo kale uu sii joogteeyay u dagaalamid afkaartiisa, waa wax aad u wanaagsan ee runtii soo jiidasho leh”.
“Wuxuu iigu yeedhay inaan tababar la qaato ciyaartoyda, taas oo aanan weli awoodin inaan sameeyo”
Lewis Hamilton ayaa wuxuu xaqiijiyay inuu yahay mid ka mid ah jamaahiirta kooxda arsenal, tan iyo markii uu ah canug yare e jira da’aada 5-aad,
Si kastaba waayaha Arsene Wenger ee kooxda Arsenal ayaa wuxuu soo idlaan doonaa dhamaadka xili ciyaareedkan, kadib markii uu dhawaan si rasmi ah u shaaciyay inuu ka tago.
Laakiin saraakiisha kooxda Gunners ayaa ilaa iyo haaran shaacinin magaca macalinka badalka u noqon doono Arsene Wenger xili ciyaareedka soo aadan.
“Hadii Uu Doonayo In Kubad Wanaagsan Uu Ciyaaro Waa Inuu Ku Biiraa Barcelona Ama Real Madrid”
Xavi Hernández Oo Ka Warbixiyay Xulka Uu U Arko In Uu Ku Guuleysan Doono Koobka Aduunka 2018